Toriteny alahady 16 Oktobra 2016 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 16 Oktobra 2016
“Mahatoky amin’ny asany ny mino »
II Tantara 34, 1-7 / Lioka 7, 1-10 / Titosy 2, 6-10
Mitady mpanompo mahafatra po ny Tompo .
Ny lioka 7, 1-10 no anompanana ny fampianarana amin’ity anio ity .
Inona no ambaran’ny Tenin’Andriamanitra mba ho isan’izay Kapiteny mahafatra-po ao amin’i Jesoa isika ?
Manasa anao hanaraka ny fanazavana
1- Mitady olona manana finona velona ny Tompo
Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa ity kapiteny ity dia isan’ny Jentilisa izany hoe tsy manaiky ny herin’Andriamanitra .Fa nony henony kosa ny mahakasika an’I Jesoa, ny hery sy fahagagana vitany dia resy lahatra izy ka naniraka ny mpanompony hampaka an’I Jesoa hanasitrana ny marary ao aminy izy. cf and 3. Manana tombony ny Kristiana ankehitriny satria efa miaraka amin’I Jesoa ary mandre mandrakariva ny momba Azy, saingy manao ahona kosa ny finoana sy ny fahatokiana ny heriny afaka miasa eo amin’ny fianantsika ? Matetika dia tsy avelantsika hiditra an-tsehatra amin’ny fianantsika ny Tompo fa toa atao anarana fotsiny ny fananana Azy ho Tompo sy Mpamonjy.
MITADY OLONA MANANA FINOANA VELONA NY TOMPO
2- Aseho amin’ny fianana andavan’andro ny fitiavana ny asan’Andriamanitra
Nanao asa soa maro teo amin’ny fiaraha monina ilay Kapiteny. Isan’izany ny fanorenana ny synagoga izay raha adika dia toerana azo ivavahana, ivoriana sns…..Cf and 4. Nanome modely tsara amin’ny finiavana hampandroso sy hampilamina ny fiainan’ny vahoaka tsirairay avy ity Kapiteny ity. Isika koa, mandraisa anjara hampandroso ny fiainan’ny olona tsirairay avy fa izany no antom-pisainao ety an-tany, ratsan-tanan’Andriamanitra hitondra fanasoavana sy fitahiana ho an’ny hafa. Anjara biriky raisintsika amin’ny fitoriana ny Filazantsara izany.
ASEHOY AMIN’NY ANDAVAN’ANDROM-PIAINANAO NY FANAOVANA NY ASAN’ANDRIAMANITRA
3- Mila fanetren-tena ny fanatonana ny Tompo
Niantso an’I Jeso mba hanasitrana ny mpanompony ilay Kapiteny, raha vao nifanatrika tamin’I Jesoa izy dia feno fanetren-tena ka tsy nanaiky hidirany ao ambany tafon-tranony akory cf and 6b. Tena efa nahatsiaro ve isika hoe niantso an’Andriamanitra tamin’y alalan’ny vavaka ka tena natrehany dia ? Nanao ahoana ny fanetren-tena tao anatinao raha nifanatrika tamin’ny Tompo ?
Nefa aoka tsy ho sakana ho amin’ny fanatonako ny Tompo ny fahalemena ato anatiko fa tsy avy hiantso ny marina ny Tompo fa ny mpanota mba hibebaka.
Mitady olona manan finona velona ny Tompo , ka heneho ny fitiavany ny asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny asa fanasoavana ny mpiara belona aminy. Raha mahatsioaro fa mifanatrika amin’ny Tompo ianao dia meteza hanana fanetren-tena lalina. Ireo no ampianarin’ny Tompo ny Kristina mba ho tena mahatoky amin’ny asany ny mino.
Mpitandrina FJKM Amboniloha
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 29 octobre 2016